သံလွင်ဆီနဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုး | MyFood Myanmar
သံလွင်ဆီနဲ့ ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုး
သံလှငျဆီကို ကွိုကျကွပါသလား? ဒီမေးခှနျးကို မေးတဲ့အခါ ကွိုကျတယျလို့ ဖွတေဲ့လူ အနညျးငယျပဲ ရှိပါလိမျ့မယျ။ ပီဇာ၊ ဆနျးဝဈဒျနဲ့ Salad တှထေဲမှာသာ ပါတဲ့ အနညျး ငယျကိုပဲ စားကွတာပါ။ ဒါပမေယျ့ သံလှငျဆီဟာ အရသာ ကောငျးရုံသာမကဘဲ ကနျြးမာရေးကောငျးကြိုးတှလေညျး ပေးပါတယျ။ အခုနောကျပိုငျးမှာတော့ သံလှငျဆီဟာ လူသိမြားလာပွီး အသုံးပွုလာကွပါပွီ။
အဓိကကတော့ အလှအပနဲ့ ကနျြးမာရေးအတှကျပါပဲ။ ခကျြပွုတျခွငျးနဲ့ ဆေးဝါး ထုတျလုပျတဲ့ နရောတှမှောလညျး သုံးကွပါတယျ။ မွထေဲပငျလယျ အနီးတဝိုကျဒသေတှမှော အသုံးမြားကွပါတယျ။ သံလှငျဆီကို Supermarket တှမှော အလှယျတကူ ရှာတှနေို့ငျပွီး ဈေးကတော့ အနညျးငယျတော့ မြားပါလိမျ့မယျ။ ဒါပမေယျ့ ဝယျနိုငျတဲ့ ပမာဏပါ။
သံလှငျဆီမှာ ဗီတာမငျ အီး ကွှယျဝစှာ ပါဝငျတဲ့ အတှကျ နှလုံးကနျြးမာရေးကို ကောငျးမှနျစပွေီး Monounsaturated Fats ပါဝငျတာကွောငျ့ နှလုံးနဲ့ ဆိုငျတဲ့ ရောဂါတှေ ဖွဈပှားမှုနှုနျး လြော့ခြ စပေါတယျ။ သံလှငျဆီ တဈနေ့ ၂၃ ဂရမျ စားသုံး ပေးပါက နှလုံး သှေးကွောကဉျြး ရောဂါနဲ့ နှလုံးအဆီဖုံး ရောဂါတို့ ဖွဈပှားမှုနှုနျး လြော့ခြာ စပေါတယျ။ သှေးဖိအားကို ထိနျးညှိပေးပွီး သှေးထဲက အဆီဓာတျကို လြော့ခပြေးပါတယျ။
သံလှငျဆီမှာ ပါဝငျတဲ့ Anti-inflammatory ရဲ့ ဂုဏျသတ်တိဟာ ကိုယျခန်ဓာမှာ ဖွဈတတျတဲ့ နာကငျြမှုတှကေို သကျသာစပေါတယျ။ သံလှငျဆီကို ရရှေညျအသုံးပွုသူတှေ အတှကျကတော့ သှေးကွောတှရေဲ့ ဖိအားကို နညျးစပွေီး သှေးလှတျကွောနံရံတှရေဲ့ ကြုံ့နိုငျဆနျ့နိုငျစှမျးအားကို မြားစပေါတယျ။ ဒါကွောငျ့ နှလုံးရုတျတရကျရပျခွငျးနဲ့ လဖွေတျ လဖွေနျးခွငျးကို ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
သံလှငျဆီဟာ ဆံပငျနဲ့ အသားအရညျအတှကျတော့ ကောငျးမှနျတဲ့ အစားအစာ တဈမြိုးပါ။ Fatty Acids နဲ့ Antioxidants တှေ ပါဝငျတဲ့ အတှကျကွောငျ့ ဆံသားရဲ့ ကနျြးမာရေးကို အထူးအထောကျအကူဖွဈစပွေီး အသားအရညျ ကွညျလငျမှုကိုလညျး ပေးပါတယျ။ အရပွေား ခွောကျသှသေူ့တှေ အတှကျ Moinsturizing စှမျးရညျပေးတဲ့ သံလှငျဆီကို လိမျးပေးခွငျးအားဖွငျ့ ကွညျလငျလာစပေါတယျ။ လလေ့ာတှရှေိ့မှုတှအေရတော့ သံလှငျဆီကို လိမျးပေးခွငျးအားဖွငျ့ အရပွေားကငျဆာဖွဈပှားမှုနှုနျး လြော့ခစြနေိုငျပါတယျ။ ဓာတျမတညျ့မှုတှေ ဖွဈတတျတဲ့သူတှေ အတှကျဆိုရငျလညျး သံလှငျဆီကို စိတျခစြှာ သုံးနိုငျပါတယျ။
သံလှငျဆီထဲမှာ ပါတဲ့ သံဓာတျဟာကိုယျထဲက ဟီမိုကလိုဘငျ ကို အမွဲ ထိနျးညှိပေးပွီး အမြိုးသမီးတှေ အတှကျ အထူး သငျ့တျောပါတယျ။ ဆံပငျကြှတျသူတှေ အတှကျ ခေါငျးမလြှျောခငျ တဈနာရီ အလိုလောကျ ဆံပငျအနှံ့ကို သံလှငျဆီလိမျးပွီး တဘတျတဈထညျနဲ့ ပေါငျးထားပေးပါ။ ပွီးမှ လြှျောခလြိုကျပါ။ ဒါဆိုရငျ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ဆံပငျကြှတျ သကျသာလာပါလိမျ့မယျ။
သံလွင်ဆီကို ကြိုက်ကြပါသလား? ဒီမေးခွန်းကို မေးတဲ့အခါ ကြိုက်တယ်လို့ ဖြေတဲ့လူ အနည်းငယ်ပဲ ရှိပါလိမ့်မယ်။ ပီဇာ၊ ဆန်းဝစ်ဒ်နဲ့ Salad တွေထဲမှာသာ ပါတဲ့ အနည်း ငယ်ကိုပဲ စားကြတာပါ။ ဒါပေမယ့် သံလွင်ဆီဟာ အရသာ ကောင်းရုံသာမကဘဲ ကျန်းမာရေးကောင်းကျိုးတွေလည်း ပေးပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ သံလွင်ဆီဟာ လူသိများလာပြီး အသုံးပြုလာကြပါပြီ။
အဓိကကတော့ အလှအပနဲ့ ကျန်းမာရေးအတွက်ပါပဲ။ ချက်ပြုတ်ခြင်းနဲ့ ဆေးဝါး ထုတ်လုပ်တဲ့ နေရာတွေမှာလည်း သုံးကြပါတယ်။ မြေထဲပင်လယ် အနီးတ၀ိုက်ဒေသတွေမှာ အသုံးများကြပါတယ်။ သံလွင်ဆီကို Supermarket တွေမှာ အလွယ်တကူ ရှာတွေ့နိုင်ပြီး ဈေးကတော့ အနည်းငယ်တော့ များပါလိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့် ၀ယ်နိုင်တဲ့ ပမာဏပါ။
သံလွင်ဆီမှာ ဗီတာမင် အီး ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ အတွက် နှလုံးကျန်းမာရေးကို ကောင်းမွန်စေပြီး Monounsaturated Fats ပါဝင်တာကြောင့် နှလုံးနဲ့ ဆိုင်တဲ့ ရောဂါတွေ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျော့ချ စေပါတယ်။ သံလွင်ဆီ တစ်နေ့ ၂၃ ဂရမ် စားသုံး ပေးပါက နှလုံး သွေးကြောကျဉ်း ရောဂါနဲ့ နှလုံးအဆီဖုံး ရောဂါတို့ ဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျော့ချာ စေပါတယ်။ သွေးဖိအားကို ထိန်းညှိပေးပြီး သွေးထဲက အဆီဓာတ်ကို လျော့ချပေးပါတယ်။
သံလွင်ဆီမှာ ပါဝင်တဲ့ Anti-inflammatory ရဲ့ ဂုဏ်သတ္တိဟာ ကိုယ်ခန္ဓာမှာ ဖြစ်တတ်တဲ့ နာကျင်မှုတွေကို သက်သာစေပါတယ်။ သံလွင်ဆီကို ရေရှည်အသုံးပြုသူတွေ အတွက်ကတော့ သွေးကြောတွေရဲ့ ဖိအားကို နည်းစေပြီး သွေးလွှတ်ကြောနံရံတွေရဲ့ ကျုံ့နိုင်ဆန့်နိုင်စွမ်းအားကို များစေပါတယ်။ ဒါကြောင့် နှလုံးရုတ်တရက်ရပ်ခြင်းနဲ့ လေဖြတ် လေဖြန်းခြင်းကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီဟာ ဆံပင်နဲ့ အသားအရည်အတွက်တော့ ကောင်းမွန်တဲ့ အစားအစာ တစ်မျိုးပါ။ Fatty Acids နဲ့ Antioxidants တွေ ပါဝင်တဲ့ အတွက်ကြောင့် ဆံသားရဲ့ ကျန်းမာရေးကို အထူးအထောက်အကူဖြစ်စေပြီး အသားအရည် ကြည်လင်မှုကိုလည်း ပေးပါတယ်။ အရေပြား ခြောက်သွေ့သူတွေ အတွက် Moinsturizing စွမ်းရည်ပေးတဲ့ သံလွင်ဆီကို လိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် ကြည်လင်လာစေပါတယ်။ လေ့လာတွေ့ရှိမှုတွေအရတော့ သံလွင်ဆီကို လိမ်းပေးခြင်းအားဖြင့် အရေပြားကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်း လျော့ချစေနိုင်ပါတယ်။ ဓာတ်မတည့်မှုတွေ ဖြစ်တတ်တဲ့သူတွေ အတွက်ဆိုရင်လည်း သံလွင်ဆီကို စိတ်ချစွာ သုံးနိုင်ပါတယ်။
သံလွင်ဆီထဲမှာ ပါတဲ့ သံဓာတ်ဟာကိုယ်ထဲက ဟီမိုကလိုဘင် ကို အမြဲ ထိန်းညှိပေးပြီး အမျိုးသမီးတွေ အတွက် အထူး သင့်တော်ပါတယ်။ ဆံပင်ကျွတ်သူတွေ အတွက် ခေါင်းမလျှော်ခင် တစ်နာရီ အလိုလောက် ဆံပင်အနှံ့ကို သံလွင်ဆီလိမ်းပြီး တဘတ်တစ်ထည်နဲ့ ပေါင်းထားပေးပါ။ ပြီးမှ လျှော်ချလိုက်ပါ။ ဒါဆိုရင် တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ဆံပင်ကျွတ် သက်သာလာပါလိမ့်မယ်။
MyFood Myanmar2019-11-17T13:32:42+06:30April 27th, 2016|Knowledge, ဟငျးခကျြဖှယျရာမြား - Ingredients|